Xulka Belgium oo markale kaalinta koowaad ka soo muuqday & England oo kaalinta saddexaad ka galay qiimeynta billaha xulalka adduunka ee FIFA … (Kaalintee ayuu ku jiraa xulkeenna Soomaaliya?) – Gool FM
(World) 16 Sebt 2021. Xiriirka kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa shaaciyey qiimeynta billaha ah ee kala sarreynta xulalka Adduunka, waxaana markale kaalinta koowaad ka soo muuqday xulka qaranka Belgium.
Xulka Qaranka Belgium ayaa dhowr bilood oo xiriir ah fikta sare kaga jira qiimeynta billaha ee FIFA oo la loodin la’ yahay.
Brazil ayaa booska labaad xirtay kaddib markii ay sare u kac muujiyeen bilihii ugu dambeeyey.
Xulka qaranka England ayaa kaalinta saddexaad kala baxay xulka ku guuleystay Koobka Adduunka 2018 lagu qabtay dalka Ruushka ee France.
Xulka qaranka France ayaa soo galay kaalinta afaraad, halka qaranka Talyaaniga uu soo tiigsaday kaalinta shanaad.
Lionel Messi iyo xulkiisa Argentina ayaa xirtay booska lixaad, halka Cristiano Ronaldo xulka uu kabtanka u yahay ee Portugal ayaa booska 7-aad ka soo muuqdeen.
Xulka Spain ayaa ku jira kaalinta siddeedaad, halka xulalka Mexico iyo Denmark ay buuxiyeen tobanka sare ee qiimeynta billaha ee xulalka adduunka ee FIFA.
Dhanka kale xulkeenna Soomaaliya ayaa sare u kac weyn sameeyey oo soo galay kaalinta 195-aad kaddib markii uu muddo badan ku jiray kaalinta 197-aad, waxaana uu haatan dalkeennu ka sarreeyaa illaa 15 xul oo ay ku jiraan Pakistan iyo Eritrea.
Xulka Jabuuti ayaa sare weyn u kac sameeyey waxaana uu ka soo muuqday kaalinta 185-aad, xulka Kenya uu joogo kaalinta 102-aad isla markaana uu ka sarreeyo dalka Ethiopia ayaana ku jira kaalinta 134-aad.